Frantsa : Hisy fifidianana ireo « Conseiller(e)s des Français de Madagascar »
jeudi, 04 novembre 2021 09:55
Raikitra amin’ny alahady 07 novambra 2021 izao ny fifidianana ireo Conseiller(e)s de Madagascar eny anivon'ny Consulat de France manerana ny Nosy.
Misy lisitra 4 no nilatsaka ho fidina, ka anisan’izany ny Association Français du Monde Madagascar. Olona efatra amin’ireo Association ireo no ho voaray ho « Conseillers des Français de Madagascar » arakaraka ny isan’ny vato azon’ny Association tsirairay.
Inona no asan’ny Conseillers des Français ?
- Mpanelanelana ireo mizaka ny zom-pirenena Frantsay amin’ireo mpitondra (administration, Ambassade, Consulat…) ireo Conseillers des Français voafidy ireo, no sady manampy amin’ny fikarakarana ny taratasy.
- Mitondra ny hetaheta sy ireo olan’ireo mitondra ny zom-pirenena Frantsay rehetra monina eto Madagasikara.
Français de Madagascar, faites vous représenter en votant le 07 novembre 2021. Votez pour la liste Français du Monde qui a déjà travaillé pour vous depuis des dizaines d’années et qui va continuer ses activités en cherchant toujours vos intérêts.